My Daily Quest ( Life Quest ) - Splintertalk
My Daily Quest ( Life Quest )
Hello Splinterlandsers Friends !
(My Cover Photo for Splinterlands Game)
Today I want to tell you how I succeeded in my daily quest.
My quest today is to win5Battle, using Life Summoner.
My Life Summoner cards are hard to use because they are low lavel cards.
However, the previous matches were difficult with experience but well planned.
After playing about few games, I was able to make sure my Battle plan was in place.
In the next games, I was lucky enough to win with the Life Summoner.
Here isalist of my matches:
My main cards used in quest battles are:
SACRED UNICORN( Mana cost 7,Speed 3, Mele attack 3, Lives 7). I like his restore health ability, which is an advantage for the front-facing card.
SHIELDBEARER( Mana cost 8,Speed 2, Mele attack 2, with4shield and lives 9). His ability is “Taunt” its means all enemy target this monsters(if they are able to). I like his tank ability.
COCATRICE( Mana cost 2,Speed 3, Mele attack 1, and lives 2). His ability is “Flying” its means has and increaced chance of evading Mele or Range attacks from monsters who do not have the flying ability. I like his ability because of his chance will waste some of enemy monsters attacks.
I used these three cards as my first tankers at events.
Following are the Combat Team Cards:
LUMINOUS EAGLE( Mana cost 6, Speed 3, Mele attack 2, lives 5). He is specially card for Life splinters. I like his “Reach” and “Flying” abilities.
PEACEBRINGER(Mana cost 4, Speed 3, Range attack2and lives 4). He isagood speed Range attacker.
CRYSTAL JAGUAR(Mana cost 4, Speed 2, Range attack 1, lives5and shield 1). He isagood Mele attacker.
TOWER GRIFFIN(Mana cost 4, Speed 3, Range attack 1 and lives 3. His/her special ability is good speed range attacking in battle.
These are as follower splinters.
In this way, I was able to successfully complete my Daily Quest ( Life Quest ).
My daily Quest Reward is nineteen Credits. So now, I have 476 Credit totally saved.
My Dark Energy Crystals is apprough to 3,000 at the moment. My DECs are gradually improving. I am in the “Bronze I” Leagues, but I am stillalow level player.
In the near future, I have decided to buy DEC(Dark Energy Crystals) and invest in Splinterlands. Only then will I be able to progress to the higher leagues and win more prizes.
At this moment I have done Steaking some SPS at Splinterlands Airdrop wallet.
Splinterlands Game is my Dream and I will play happily and more investing in future.
Well, Let me pause my post here. Good luck to all Splinterlands friends.
The images used in this post are taken fromascreen shot of images from the Splinterlands Game. Special thanks to Splinterlands Game.
မဂ်လာပါ Splinterlandsers မိတ်ဆွေများခင်ဗျား။
ဒီနေ့ကျွန်တော် တင်ပြလိုသည်က ကျွန်တော်၏ နေ့စဉ်Quest လေးအား အောင်မြင်ခဲ့ပုံအား ပြောပြလိုပါတယ်။
ကျွန်တော်၏ ယနေ့Quest မှာ Life Summoner ကိုအသုံးပြုပီး Battle 5ပွဲနိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့ Life Quest ဖြစ်ပါတယ်။
Life Summoner မှာ ကျွန်တော့အတွက် Leval နိမ့်သောကဒ်များဖြစ်နေသည့်အတွက် အသုံးပြုရခက်သော Summoner အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယခင်ပွဲစဉ်များက အတွေ့အကြုံဖြင့် ခက်ခဲသော်လည်း အသေအချာစီစဉ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ပွဲစဉ် အချို့ ကစားပီးချိန်မှာ ကျွန်တော့ရဲ့ Battleအစီအစဉ်ကို သေချာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
နောက်ထပ်ပွဲစဉ်များမှာ ကျတော်ဟာ ကံကောင်းထောက်မစွာ Life Summoner နှင့်ကောင်းစွာနိုင်ပွဲရရှိလာပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်၏ ပွဲစဉ်များကို အစဉ်လိုက်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ပွဲစဉ်များတွင် ကျွန်တော်၏ အဓိကအသုံးပြုဖြစ်သော ကဒ်များမှာ--
SACRED UNICORN( Mana ကုန်ကျစရိတ် 7၊ Speed 3၊ Mele attack 3၊ Lives 7)။ အကြိမ်တိုင်းတွင် သူ၏အသက်အားပြန်ဖြည့်လာမှုကို သဘောကျတယ် ရှေ့ထွက်အမာခံကဒ်အတွက် အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
SHIELDBEARER ( Mana ကုန်ကျစရိတ် 8 ၊ Speed2၊ Mele attack2၊ ဒိုင်း4ခု နှင့် အသက် 9)။ သူ၏စွမ်းရည်မှာ "Taunt" ဖြစ်ပြီး ရန်သူအားလုံးသည် ထိုကဒ်ကိုသာ ပစ်မှတ်ထားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သူ့ရဲ့ ရှေ့ထွက် Tank စွမ်းရည်ကို ကျွန်တော် သဘောကျတယ်။
COCATRICE( Mana ကုန်ကျစရိတ် 2၊ Speed 3၊ Mele attack 1 နှင့် အသက် 2)။ သူ၏စွမ်းရည်မှာ "Flying" ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ ပျံသန်းနိုင်စွမ်းမရှိသော monster များထံမှ Mele သို့မဟုတ် Range တိုက်ခိုက်မှုများကို ရှောင်လွှဲရန် အခွင့်အလမ်း ပိုများလာသည်။ သူ့ရဲ့ အစွမ်းအစကြောင့် ရန်သူ monsters တွေရဲ့ အစပိုင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကို ဖြုန်းတီးပစ်မယ့် အခွင့်အရေးကို ကျွန်တော် သဘောကျတယ်။
အထက်ပါကဒ်များဟာ ကျွန်တော်၏ ရှေ့ထွက် အမာခံတပ်သားများဖြစ်ကြပီး-
ကျွန်တော်၏ အဓိက တိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့ ကဒ်များကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။-
LUMINOUS EAGLE( Mana cost 6, Speed 3, Mele attack 2, lives 5). သူကတော့Life splinters ရဲ့ အားထားရတဲ့ ထောက်ပံ့ရေးကဒ်တစ်ခုပါ။ သူ့ရဲ့ “Reach” နှင့် “Flying” စွမ်းရည်နှစ်ခုဟာ အလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်။
PEACEBRINGER(Mana cost 4, Speed 3, Range attack2and lives 4). သူကတော့ လျင်မြန်သော Range Speed ရှိလို့ ရွေးချယ်ရမည့်ကဒ်တစ်ခုပါ။.
CRYSTAL JAGUAR(Mana cost 4, Speed 2, Range attack 1, lives5and shield 1). သူကတော့ Mele attacker အနီးကပ်တိုက်ခိုက်သူပါ။.
TOWER GRIFFIN(Mana cost 4, Speed 3, Range attack 1 and lives 3. သူ/သူမ၏ အဓိကစွမ်းရည်က Range attack စွမ်းရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
စသည်တို့အား နောက်လိုက်တိုက်ခိုက်ရေးသမားများအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။
ဤသို့အားဖြင့် ကျွန်တော်၏ နေ့စဉ် Quest အား အဆင်ပြေချောမွေ့စွာအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်၏ နေ့စဉ် Quest Reward ကတော့ Credits တစ်ဆယ့်ကိုးခုအာ ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့တွင် Credits စုစုပေါင်း ၄၇၆ ခု စုဆောင်းမိပြီဖြစ်ပါတယ်။
ယခုအချိန်တွင် ကျွန်တော်၏ DARK ENERGY CRYSTALS သည် ၃၀၀၀ သို့ရောက်ရှိရန် အနည်းသာ လိုပါတော့သည်။ ကျွန်တော်၏ DEC များမှာ တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာပါသည်။ ကျွန်တော်ဟာ Bronze I Leagues မှာရပ်တည်နေပါသည်။ သို့သော်လည်း ယခုအချိန်ထိတွင် ကျွန်တာ်ဟာ အဆင့်နိမ့်သော ကစားသမားဖြစ်နေပါသေးသည်။
နောင်လာမည့် မကြာသောအချိန်တွင် ကျွန်တော်သည် DEC(Dark Energy Crystals)များ ဝယ်ယူကာ Splinterlands တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းပြုလုပ်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ထားပါသည်။ သို့မှသာ အဆင့်မြင့်သော Leagues များသို့ တက်လှမ်းနိုင်ပီး ဆုကြေးများစွာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ယခုအချိန်တွင် Splinterlands Airdrop wallet တွင် SPS အချို့ကို Steaking ပြုလုပ်ပြီးပါပြီ။
Splinterlands ဂိမ်းသည် ကျွန်ုပ်၏ အိပ်မက်ဖြစ်ပြီး အနာဂတ်တွင် ပျော်ရွှင်စွာဆက်လက် ကစားပြီး ပိုမိုရင်းနှီးမြုပ်နှံပါဦးမည်။
ကောင်းပါပီ-ကျွန်တော်၏ ပိုစ်လေးအား ဤတွင် ခေတ္တရပ်နားပါအုန်းမည်။ Splinterlands မိတ်ဆွေများအားလုံး အောင်မြင်ကြပါစေ။
ဤပိုစ်တွင်အသုံးပြုသော ပုံများမှာ Splinterlands Game မှ ပုံရိပ်များအား Screen Shoot ပြုလုပ်ကာ အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Splinterlands Gameအား အထူးကျေးဇူးတင်နေပါသည်။
hive-131619 splinterlands spt hive-gaming hivelist proofofbrain trafficinsider neoxian oneup archon
Where did the ice cream man get his driver's licence?
အားကျရင် ချသာချ Welcome !PIZZA !LOLZ
Hive Blockchain gaming is the best for all.
Yes right, We love Blockchain Games. !PIZZA !LOLZ
@nyinyiwin(8/10) tipped @uthantzin (x1)